Iinwele Zamadoda | Eyekhala 2022
Iinwele zikaZayn Malik, ezinje ngoJustin Bieber, zilandelwe ngokusondeleyo ukusukela ekubambeni kwakhe kwiqela lamakhwenkwe, One Direction. Ngelixa iinwele zika Zayn kunye nomculo zitshintshile ngokuhamba kwexesha, inkwenkwezi yepop…
Ungazilibala njani iinwele: Yenza iinwele zakho ziFade ngeeClippers
Ukuphela yenye yeenwele ezithandwa kakhulu ngamadoda kwaye iyaqhubeka nokuba yeyona ndlela yokusika iinwele zakho emacaleni nasemva kwentloko. …
Izinwele Zokuphela Kwamadoda
Ukunqunyulwa kweenwele eziphelileyo kuphakathi kolunye uhlobo lwezinwele oludumileyo lwamadoda, ngokuyinxenye ngenxa yeentlobo ezahlukeneyo zokuphelelwa ngamandla onokuthi uzicele. Ngapha koko, iinwele zamadoda zale mihla…
Izitayile zeenwele zamadoda amadala akufuneki zibe zezidinayo kunye nolondolozo. Emva kwayo yonke loo nto, ukufumana iinwele ezinde nezimfutshane zamadoda angaphezulu kweminyaka engama-50 akufuneki zithethe ukuba ufumana…
Iinwele ezinde zamadoda ziyaqhubeka ukubonakala zinemfashini kwaye zihamba kakuhle. Iinwele ezinde zamadoda ziyenye indlela efanelekileyo kunokunqunyulwa okufutshane kweenwele. Ngelixa ayingawo onke amadoda anokutsala ...
Oomama bahlala bekhangela ezona nwele zilungileyo zomntwana oyinkwenkwe. Kwaye kudala zahamba iintsuku apho onke amakhwenkwe amancinci alungisa iinxalenye ezifanayo, ikama ngaphezulu, okanye…
Ngaba ujonge ishampu yebhloko ye-DHT? Siphande ngeyona shampoos ibalaseleyo ye-DHT kwimakethi ukufumana iimveliso ezisebenza ngaphandle kweziphumo ebezingalindelekanga. Yenziwe ngezithako zendalo ezifana…
Izinwele ezimfutshane emadodeni ziya kuhlala zikwisimbo. Izinwele ezimfutshane zigcinwa kancinci, zibudoda kwaye kulula ukuzenza. Ngefade okanye i-undercut emacaleni nasemva kudityaniswe ne ...
Ukufumana ezona zilungileyo iinwele zamadoda amnyama ukuzama kunokuba ngumceli mngeni ukuba awuqinisekanga malunga nokuba zeziphi iindlela ezintsha ezikhoyo phaya. Iinwele eziphezulu zamadoda amnyama zihlala…
Uyenza njani isitayile sePompadour yanamhlanje
I-pompadour yanamhlanje yinguqulelo yesitayile esipholileyo. Ngelixa iinwele zeepompadour zamadoda yenye yezona zibonakala zithandwayo kwiindawo zokucheba iinwele kule mihla, isitayile…
Ukuba ufuna iinwele ezinesitayile kunye nezobuchwephesha, uya kuthanda iinwele ezibuyisiweyo. Iinwele zamadoda ezigexileyo ezisemva zisetyenziswe kuyo yonke le minyaka njengendlela ekhawulezayo…
Ndifanele ndichebe ntoni? Okanye mhlawumbi indlela ebhetele yokuyibeka yile nto indilungeleyo? Le yimibuzo eqhelekileyo ezibuzwa ngabafana ngaphambi kokukhetha enye ye…
Ngamakhwenkwe amaninzi anweleyo anokukhetha kuwo, ukukhetha enye yezi ndlela zokupholisa iinwele kunokuba ngumceli mngeni. Ngethamsanqa, zonke ezi zinwele zinde zincinci ezimfutshane…
4 phezulu 2 emacaleni
indlela yokufumana uphawu lwakho olukhulayo
amanxeba aphantsi amadoda amnyama
Ungamfumana njani umntu osebenza naye kwi-Astrological Soulmate nge-Synastry (+I-Synastry Calculator yasimahla)